Products Ngwa Ngwa Ike Quality Ogo etinyere na ya Service Ọrụ dị mma
3E Engineering Corporation Limited bụ otu ụlọ ahịa na-eduga valves ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa na China nke hiwere na 2003, 3E pụtara ngwaahịa ike, arụpụtara nke ọma, ọrụ dị mma. Anyị na -ejikọta R&D, imepụta, njikọta akụ na ọrụ azụmaahịa n'ime otu. Ruo afọ 18, anyị agbaala mbọ ịchọta ngwọta maka ndị ahịa anyị yana ịnye ọrụ ọkachamara n'ihe banyere valvụ izugbe na ọpụrụiche.
Anyị nwere ebe anọ jisiri nke ọma: ebe a na-ere ahịa, ebe a na-ahụ maka ihe ọkọnọ, ebe nrụpụta na ebe njikọta. Onye ọ bụla na -arụ ọrụ nke ya n'akụkụ dị iche iche mana ọ na -arụ ọrụ dị ka injin anọ siri ike, na -ebuga 3E n'ihu n'otu ụzọ - na -enye ndị ahịa anyị ngwaahịa na ọrụ ka mma.
Mpaghara azụmaahịa anyị gụnyere imepụta, imepụta na ịkpụzi, ịchekwa valvụ, ịkpọ aha na mbukota, mmegharị valvụ, ịrụzi na nrụzigharị, nkwado saịtị wdg….
Ngwa anyị kachasị gụnyere valvụ valvụ izugbe (nha: 0.5 ”ruo 56”, nrụgide: 150Lb ruo 2500Lb), valvụ ọnụ ụzọ (nha: 0.5 ”ruo 60”, nrụgide: 150Lb ruo 2500Lb), valvụ ụwa (nha: 0.5 ”Ruo 24”, nrụgide: 150Lb ruo 4500Lb), lelee valvụ (nha: 0.5 ”ruo 60”, nrụgide: 150Lb ruo 2500Lb), valvụ nkwụnye (nha: 0.5 ”ruo 36”, nrụgide: 150Lb ruo 2500Lb), valvụ urukurubụba (nha: 2 ”ruo 48”, nrụgide: 150Lb ruo 900Lb), strainers (nha: 2 ”ruo 36”, nrụgide: 150Lb ruo 900Lb) na akwa akwa yana ntinye maka ngwaahịa ahaziri., A na -arụpụta ihe niile ka ọ bụrụ nkọwapụta na ụkpụrụ ụlọ ọrụ, nke gụnyere ANSI, API, BS, DIN, JIS, GB na JB. A na-etinye injinia 3E na mpaghara nke ike, kemịkalụ na mmanụ ala, mmanụ na gas, igwe na-ahụ maka ụgbọ mmiri, ọgwụ, na ụlọ ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi. USA, Mexico, Italy, Brazil, South Africa na Middle East wdg …… .. nke na -emeju ndị ahịa anyị ezigbo mma na ezigbo ọrụ.
Anyị na -eche karịa ndị na -eme mkpọtụ. N'oge njem azụmahịa anyị, anyị emebela ezigbo mmekọrịta n'etiti ndị ahịa,. Anyị na-alụ ọgụ mgbe niile maka ime ka ndị ahịa anyị baa uru, Anyị na-atụle mkpa na mmasị ndị ahịa dị ka nke anyị, Iji melite ogo na ọrụ oge niile bụ ebumnuche anyị, Anyị nwere ike ịnye ọnụ ahịa ezi uche na usoro ịkwụ ụgwọ yana nnyefe ngwa ngwa, Iook na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa n'ụwa niile iji mepụta ọnụ ọnụ.